Arsenal Oo Doonaysa Benzema,United Oo Laba Weeraryahan Ka Doonaysa Premier League & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 January Suuqa, Wararka Maanta Arsenal Oo Doonaysa Benzema,United Oo Laba Weeraryahan Ka Doonaysa Premier League & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga
Arsenal Oo Doonaysa Benzema,United Oo Laba Weeraryahan Ka Doonaysa Premier League & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga
Suuqa kala iibsiga ayaa si Rasmi ah uga furmay horyaalada yurub xilli kooxaha reer yurub ay suuqa u gali doonaan sidii ay u xoojin lahaayeen kooxdooda.
Man United oo xiiso u muujisay xiddigaha weerarka uga ciyaara kooxaha Leicester city iyo West Ham ee Jamie Vardy Iyo Javier Hernandez (Daily Star).
Kooxaha Man United iyo Chelsea ayaa isku baacsan doona xiddiga khadka dhexe ee xulka Brazil iyo kooxda Gremio ee Arthur Melo (Daily Star).
Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa aaminsan in xiddiga kooxda PSG ee Julian Draxler uu ku soo biirayo kooxda Arsenal kadib markii uu ka soo qayb galay kulan NBA ah xilli ay weheliyaan xiddigo badan oo Arsenal ah (Daily Mirror).
Tababaraha kooxda chelsea ee Antonio Conte ayaa ku dhaw in uu ka tago kooxda xilli tababarayaasha Max Allegri Iyo Luis Enrique ka mid yihiin tababarayasha u sharaxan shaqada kooxda (Daily Mail).
Kooxda Liverpool ayaa diyaar u ah in ay iibiso Weeraryahanka Daniel Sturridge iyada oo 30 Milyan ku iibinaysa kadib markii uu xiddigu codsaday in uu ka tago Anfield (Daily Mail).
Alexis Sanchez ayaa iska diiday Jose Mourinho si uu ugu biiro kooxda Man city inta lagu guda jiro suuqa January ama xagaaga (The Sun).
Kooxda Arsenal ayaa beenisay wararka ka imanaya Italy ee sheegaya in ay heshiis la gaareen tababarihii hore ee kooxda chelsea ee Carlo Ancelotti si uu shaqada uga badalo Wenger xagaaga (Daiy Mirror).
Liverpool ayaa wadahadalo kula jira kooxda Leicester city iyada oo ka doonaysa Riyad Mahrez laakiin xiddiga ayaa doonaya in uu ku biiro kooxda Arsenal (Express).
Kooxda Liverpool ayaa si Rasmi ah wadahadalo ula furtay kooxda RB Leipzig iyaga oo ka doonaya xiddiga khadka dhexe ee Naby Keita (The Times).
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay kor u qaaday dadaalkii ay ku doonaysay saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Karim Bezema (Diario Gol).
Kooxda Liverpool ayaa ku dhaw in ay Man United ka afduubato saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda PSG ee Lucas Moura kadib markii kooxda PSG Liverpool u soo bandhigtay fursad ay ku heli karaan xiddiga reer Brazil (La Parisien).
Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa in uu wadahadalo qarsoodi ah la qaatay xiddiga kooxda Ajax ee Justin Kluivert isaga oo doonaya in uu ku soo daro kooxdiisa Manchester United (Sport).
Agaasimaha kooxda Ac Milan ee Massimiliano Mirabelli ayaa qirtay in ayna Kooxda Milan xiddigo la soo saxiixan doonin Jananury isla markaasna xiddigo iibin doonaan si ay faa,iido uga helaan (Gazetta dello Sport).
Daafaca Kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar ayaa sheegay in uu doonayo in uu sii joogo kooxda Inter Milan muddo dheer inkasta oo uu xiiso ka helayo kooxaha Man City and Barcelona (MY Sports).
Xiddiga khadka dhexe ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda reer china ee Jiangsu Suning Ramires ayaa kooxdiisa ku qasbaya in uu ku biiro kooxda Inter Milan (Sky Italia).
Kooxda Inter Milan ayaa si aad ah ugu sii dhawaanaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Rafinha (Mundo Deportivo).